Wikipedia:Waxbarid - Wikipedia
Macluumaadka hoos ku qoray waxaad ka heli kartaa tilmaamo iyo warbixin kaa caawin karta sida ugu haboon ee wax loogu qoro Wikipedia Af-Soomaaliga.
Fiidiyo kaa caawin kara sida wax loo bedelo
Wikipedia waa Insaykolobeediya xor ah haddii aad wax ka bedelayso adigoo ka qayb qaadanaya habka wax bedelka, dhammaan waxaa u suuragali karta in ay ka qayb qaataan waxa ku jira hadba aqoontooda iyagoo raacinaya dhexdhexaadnimada iyo aqoon kana fogaanaya caqiidooyin iyo afkaar aydolojiyadeed. qormadaan waxay kaa caawin kartaa in aad ka mid noqoto Wikipediyahan xulan.
Marka kuugu horeeysa ee biloowdo waxqoritaanka Wikipedia waxaa laga yaabaa inaad ku jaho-wareerto sida wax loo qoro. Taasi waa iska caadi oo qof kasta meel ayuu ka bilaaba, sidaasi darteed ayaa waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad isticmaasho dareenkaaga saxda ah, adiga oo qoraya waxyaabaha aad isleedahay waa muhiim ama faa'iido ayay u leeyihiin dadka iyo bulshada Af-Soomaaliga ku hadasha. Markasta oo ku jaho wareerto mashruuc ama sida wax loo bedelo fadlan ku noqo Boga caawinaada.
Ujeedada ugu muhiimsan Wikipediahan waa inaan helno bulsho ku hadasha isla markaana qorta luuqada Af-Soomaaliga taasi oo u faa'iideysa dhamaanba dadkeen, sidaasi darteed waxaa muhiim ah inaad aqoon iyo fahan u leedahay waxyaabaha aad ku darsanayo Wikipediahan.
Waxa meel ka dhac ah inaad samayso isbedel khalad ah ood ogtahay, inaad dadka kale afxumayso, ama aad qorto/samayso bog aan micno lahayn. Taasi waxay khasaare ku tahay adiga wakhtigaaga oo wixii aad ku mashquushay cid ka faa'iideysatay malahan; mar labaadkana waxay khasaare ku tahay bogan oo macluumaad khalad ah aad gelisay. Sidaasi darteed waxaanu si sharaf iyo qadarin leh kaaga codsanaynaa inaad ku dadaasho dhowrista xuquuqda bartan, dadka isticmaalayaasha ah iyo dhamaan maqaalada iyo bogaga diyaarka ah.
Hadii aad su'aal qabto fadlan soo booqo boga Su'aalaha guud ama boga maamulka si aad ula xidhiidho.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Waxbarid&oldid=171606"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Oktoobar 2017, marka ee eheed 09:20.